NVC ကတ် ကိုင်ဆောင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပြုခြင်းကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချ?? - Yangon Media Group
NVC ကတ် ကိုင်ဆောင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပြုခြင်းကို ကန့်ကွက် ရှုတ်ချ??
ကွမ်းလုံ-နားတီးတံတားကို မြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့က မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး နမ့်ပေါင်တိုက်နယ်ရှိ နယ်မြေခံတပ်ရင်းဌာနချုပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရ
ဗစ်တိုးရီးယားကလေးငယ် ဓာတ်ပုံရွေးထုတ်ပြသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်သုံးဖိုင်ကို ဥပဒေအရာရှိက သက်သေခံမဝင်ကြောင်း ကန့်ကွက်ခဲ့သော်လည်း ဗီဒီယိုဖိုင်များကို တရားရုံးက လက်ခံ၊ စွပ်စွဲခံအောင်ကြီး အာမခံရရှိရေးကိုဆောင်ရွက်မည်ဟု ရှေ့နေဆို
မန္တလေးမြို့ပေါ်ရှိ ဖိနပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် သေနတ်၊ ဓားများနှင့် ကျည်ဆန်များ ဖမ်းဆီးရမိ
လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် တရားသူကြီးအင်အားမမျှတသဖြင့် ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံတိုးချဲ့ရန်လိုဟု လွှတ်တော်အမတ်ဆို
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၆
NVC ကတ် ကိုင်ဆောင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပြုခြင်း ကိစ္စကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ် (၂၁) ရပ်ကွက်တွင် မေ ၂၆ ရက် နံနက် ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကို မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း ရှိ ပြည်သူ့အင်အား ၅ဝဝ ခန့်ပါဝင် သောအဖွဲ့က နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီခွဲထိ ပြည်သူအများက ကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည့်ြေ<ွကးကြော်သံ စာတန်းပါ ဗီနိုင်းများကိုင်ဆောင် အသုံးပြုပြီး ရွှေပေါက်ကံမြို့သစ် ကားကြီးဂိတ်စုရပ်မှ ပုဂံလမ်းမကြီး အတိုင်း အရှေ့ဘက်သို့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြရာ မီးသတ်မှတ်တိုင်အနီးရှိ ဘောလုံး ကွင်းစည်းရိုးအပြင်ဘက်တွင် စု ဝေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ”ဒါကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဘူး။ ဘင်္ဂါလီ တွေသွားချင်တိုင်းသွားနေတော့မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ဝင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်တာဖြစ်ပါ တယ်”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူ ဒေးသို့ မေ ၂၆ ရက်က ပြောသည်။
အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ဘင်္ဂါလီများကို နိုင်ငံအတွင်းလွတ် လပ်စွာသွားလာခွင့်ပြုခြင်း၊ NVC ကတ်ကိုင်ဆောင်ကာ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပြု ခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားများထက် ဘင်္ဂါလီများအား ဦးစားပေးနေခြင်းတို့အား ကန့်ကွက်ပါကြောင်းနှင့်နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးများအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာမည့် အကြံလက်မခံကြောင်းတို့ကို သံပြိုင်ကြွေးကြော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ ကြကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် NVC ကတ်နှင့် လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေများ၊ အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုံခြုံ ရေး၊ ပညာရေးနှင့် နိုင်ငံအရေး အတွေးအမြင်အယူအဆများအား စုဝေးရောက်ရှိလာ ပြည်သူအများ ဟောပြောခဲ့ကြပြီးနောက် ကြွေးကြော်သံသုံးရပ်ကိြုေ<ွကးကြော်ကာ ဇာတိမာန်သီချင်းကို သံပြိုင်ဟစ် ကြွေးသီဆိုကာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများကို အရည်အချင်းတူပါက NLD က အမျိုးသမီးများကို ဦး?
အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် မချိုးဖောက်ရန် ဆီးရီးယားကို အမေရိကန် သတိပေး
ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်နှစ်ရပ်၏ သဘောထားကွဲလွဲချက်ငါးချက်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြန်လည်ဆွေးနွေးမည်
ကွတ်ခိုင်-မူဆယ်ကားလမ်းပေါ် ယာဉ်များပစ်ခတ်ခံရ၊ တွဲကားဘီးများပျက်စီးကာ ကန့်လန့်ခံနေသဖြင့် ကားလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေါ်
မြန်မာပလာဇာကားပါကင်အတွင်း ယာဉ်များပိတ်မိနေရာမှ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွား၊ ပလာဇာတာဝန်ရှိသူ
အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် အဖွင့်နှစ်ပွဲကို ဂျူဗင်တပ်နည်းပြဆာရီ လွဲချော်မည်
အလုပ်လက်မဲ့နှင့် တိုးပွားလာသည့် ပြည့်တန်ဆာပြဿနာ
ကမန်လူမျိုး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများ ထုတ်ပေးခဲ့သူများကို အရေးယူရန် စီစဉ်နေ ?
လက်ရှိ သမ္မတ မာဒူရိုကို ပခုံးချင်းယှဉ်နိုင်သူအဖြစ် ထင်ကြေးပေးထားသော ဗင်နီဇွဲလား လွှတ်တော်ခေ
လက်ရှိအစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း အဂတိမှုဖြင့် အရေးယူခံရသည့် ရန်ကုန်စည်ပင် ဝန်ထမ်း တစ်ဦးမျှမရှိ ဟုဆို
Share 5494 Tweet 0
‘လိပ်ပြာစံအိမ်’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရုံတင်ပြသသွားမည်
ကျောင်းသားနည်းပြီး ဆရာများနေသော ကျောင်းများမှ ဆရာများကို အခြားကျောင်းများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် တွဲဖက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေခြင်းများ ပြုလုပ်မည်
Share 3823 Tweet 0
သီတဂူဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသားသစ်ကြိုဆို
အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခွင့် တကယ်ဖြစ်သင့်လား